Nweta, Efu na Mmeghe LMS Nweta: Atụmatụ na Ọrụ | Site na Linux
Nweta, Efu na Mmeghe LMS Nweta: Atụmatụ na Ọrụ
na LMS nyiwe ma obu nke Usoro Nhazi Mmụta Ntanetị, na-enye a oru oma ma di irè ozo, imepụta ihe ohuru Usoro nkuzi na mmụta, nke ahụ bụ, na etolite na / ma ọ bụ izi usoro.
Ejiri ụfọdụ n'ime ndị a kee Free Software na Open Source na / ma ọ bụ bụ nanị free. N'ụzọ dị otú ahụ na ọtụtụ nwere ike ime ka ọtụtụ n'ime ha oge, akụrụngwa na ikike na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ efu efu, karịsịa n'oge ihe isi ike, dị ka nke anyị na-ebi taa n'ụwa nile, na Coronavirus 19 ma ọ bụ COVID-19.
na LMS nyiwe na-akacha eji na ulo akwukwo o maka ebumnuche agụmakwụkwọ / ọzụzụ, ya mere enwere otutu ulo akwukwo ma obu ulo oru nkuzi, oha na eze, dika Mahadum, kọleji na ụlọ akwụkwọ ndị na-eme ka ndị nwere mmasị nwee ya.
1 LMS nyiwe n'efu, n'efu ma mepee
1.1 Onye ndu
1.2 Kanvas LMS
1.4 Puku Klas
LMS nyiwe n'efu, n'efu ma mepee
N'etiti ndị kasị dị ịrịba ama, nke ọ bụla n'ime LMS nyiwe n'efu, n'efu ma mepee nke dị na ahịa dị ugbu a, anyị nwere ike ịkọwa ihe ndị a:
Ọ bụ ngwa ọrụ emeghe nwere ike ịmepụta LMS Platform.
Ọ bụ ATRC Organisation (Adaptive Technology Resource Center) mepụtara ya na Canada.
Emere ya na PHP, Apache, MySQL, enwere ike itinye ya na Windows, GNU Linux ma ọ bụ Unix Solaris.
Ọ bụ ugbu a na mbipute 2.2.4, nke dị n'ihe karịrị asụsụ 30, ma dakọtara na ụdị SCORM 1.2.
Ọ nwere ngwa nkuzi elektrọnik (e-mmụta), dịka Social Learning, Blogs, Forums na Wikis.
Ntinye ya na ojiji ya dị mfe, ọ na-enyekwa ohere ịmegharị modulu na gburugburu.
Ọ na-elekwasị anya na ịnweta na ngbanwe iji kwado nnweta na ịdị mfe nke ndị mmadụ nwere ike inwe nkwarụ.
Ihe ọghọm dị na ya bụ ọdịdị ọdịdị ya, ya bụ, ihu igwe ya na ntanetị. Na mgbakwunye, ọ naghị asụ ụzọ esi akwụ ụgwọ / ịnakọta, ma ọ bụ ụlọ ahịa ahịa dijitalụ. Ma ike ntanetị ya nwere oke.
Iji mụtakwuo banyere ngwá ọrụ a ị nwere ike ịnweta kedu ihe ohuru na udi nke ugbua na nkọwa nke modulu nke mejupụtara ya.
Ọ bụ LMS Platform dị n'ịntanetị dabere na oghere mepere emepe, n'okpuru ikikere AGPLv3.
Emepụtara ya na USA site na Developmenttù Mmepe Software "Nhazi, Inc".
Ọ nwere interface na-adọrọ adọrọ na enyi na enyi, lekwasịrị anya na ijikwa ndị ọrụ na onye nchịkwa.
Ọ nwere nhazi nke oge a, yana ezigbo ịdị mfe nke iji, nke mere na ndị otu ama ama na-eji ya eme ihe maka usoro izizi kọmputa ha (e-mmụta).
Ọ nwere ezigbo ikike ntanetị weebụ, nke na-eme ka ọ dị mma maka ojiji na ngwaọrụ dị iche iche. Na mgbakwunye, ọ na-akwado teknụzụ LTI (Learning Tools Interoperability) ọhụụ.
Ọ nwere Dashboard nwere akara ngosi mara mma iji kwado usoro mmụta yana nwee ezigbo mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ya bụ, sistemụ na akụrụngwa iji kwalite mmụta mkpokọta.
Isi ọghọm bụ na iji ọrụ ọ bụla ọzọ na ndị bụ isi, ị ga-akwụ ụgwọ maka ya, yana maka nkwado ahụ. Na mgbakwunye, ọ nwere ohere ịhazi aha ole na ole.
Iji mụtakwuo banyere ngwá ọrụ a ị nwere ike ịnweta ya ọzọ obodo saịtị ugbu a, gị na ebe GitHub.
Ọ bụ nzukọ na-enweghị uru "Asociación Chamilo" mepụtara ya na Spain.
"Tù "Chamilo Association" na-achọ ịkwalite mmepe ahụ ma hụ na ojiji nke LMS Chamilo Platform, otu n'ime ebumnuche ya bụ ịkwado nnweta mmụta n'efu na ụwa niile.
Aha ya n'asụsụ Spanish pụtara "Chameleon", nke gosipụtara ebumnuche ya nke ịbụ LMS Platform n'efu, na-agbanwe agbanwe ma na-adịrị ndị ka n'ọnụ ọgụgụ, nke mere na ejiri ya n'ọtụtụ ebe n'ụlọ akwụkwọ, mahadum na ụlọ akwụkwọ.
Ọ na-enye ohere ntinye, mgbanwe na okike nke ihe ndị ọzọ iji mee ka ọ kwekọọ na mkpa ụfọdụ nke usoro nkuzi elektrọnik (e-mmụta), n'ihi eziokwu ahụ ọ dị n'okpuru ikikere GNU / GLP v3.
Ọ dabere na koodu LMS Dokeos Platform. A na-ejikwa ya ugbu a na ihe karịrị mba 180 gburugburu ụwa, yana ihe karịrị nde mmadụ 20 ndebanye aha.
Emere ya na PHP, Apache, MySQL, enwere ike itinye ya na Windows, MacOS na GNU Linux.
Ihe ọghọm dị na ya bụ na ọ dị mkpa ijikọ ya na ngwaọrụ ndị ọzọ iji nwee ike ree ihe ọmụmụ na ntanetị (Ahịa). Ọzọkwa, dịka ọtụtụ ndị ọrụ si kwuo, ọ chọrọ mmelite oge niile, yana ahụmịhe onye ọrụ abụghị klas mbụ.
Iji mụtakwuo banyere ngwá ọrụ a ị nwere ike ịnweta ya Blọgụ gọọmentị na Nkebi nke "Ugboro ajụjụ" ya ukara website.
Ọ bụ nyiwe LMS dị n'ịntanetị dabere na oghere emeghe, nke na-enye Moodle web hosting n'efu.
Ọ bụ ụlọ ọrụ nke ndị Fans nke Moodle mepụtara ka ha wee nwee ike ịnye ọrụ LMS n'efu, n'okpuru atụmatụ azụmahịa ego site na Google AdSense.
Ọrụ a na-enye gị ohere ibugo usoro ọmụmụ gị n'efu, ma mee ka ọha na eze nwee ike ịnabata ha n'ọnọdụ ụfọdụ, yabụ ọ bara uru maka ụfọdụ ọrụ agụmakwụkwọ na-akwụghị ụgwọ na akwụ ụgwọ.
Ọ na - enye gị ohere ịmepụta obodo mmụta gị n'ịntanetị, nke ahụ bụ, klaasị mebere, yana subdomain nke ya, nnweta echedoro, ikike ọchịchị zuru oke yana n'efu kpamkpam.
Ihe ọghọm kachasị bụ na ndị sonyere (ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ ndị ahịa) gụrụ mgbasa ozi, nke a na-ahụkarị dị ka ihe ọjọọ ma ọ bụ nke dị ala site n'aka ha. Na mgbakwunye, ikike ire ere ya pere mpe, ebe ọ naghị agwakọta modulu ịkwụ ụgwọ, yana enweghị ike ịhazi ụzọ mepụtara, nke dị mkpa iji nye ya iwu karịa ọkwa azụmaahịa.
Iji mụtakwuo banyere ngwá ọrụ a ị nwere ike ịnweta ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ebe niile gị Ọnọdụ, atụmatụ mgbasa ozi na onyinye, Iwu maka deactivating na ihichapụ ọmụmụ, Creatmepụta nkwado ndabere na ojiji nke tinye-ons. You nwere ike ịnweta saịtị ndị eji ngwaọrụ ejiri rụọ ọrụ ndị a njikọ, inyocha ikike nke ya.
Onye mepụtara ya bụ ọkà mmụta sayensị na kọmputa na Australia bụ Martin Dougiamas, bụ onye wepụtara nsụgharị nke mbụ nke August 20, 2002.
Taa, Moodle Project na-eduzi ma na-ahazi ya, site na isi ụlọ ọrụ Moodle, nke bụ nzukọ nke ụlọ ọrụ na-akwado ụwa niile ma ọ bụ Moodle Partners na-akwado ego.
Ezubere ya iji nye ndị niile sonyere (ndị nkuzi, ndị nchịkwa, na ụmụ akwụkwọ) otu sistemụ siri ike, ma sie ike, na-enweghị ego ma ọ bụ dị ọnụ ala, gburugburu mmụta mmụta ahaziri iche.
Ọ bụ nnọọ customizable. Na-akwado nnabata ma ọ bụ mmepe nke modulu na ọrụ omenala, dịka, ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, nzukọ vidiyo, ịme egwuregwu.
Isi ọghọm bụ na ya eserese interface abụghị nnọọ elu ma ọ bụ onye ọrụ-enyi na enyi. Ma site na mmepe nke aka ma ọ bụ nke mpụga, n'efu ma ọ bụ akwụ ụgwọ, ọ bụ ihe nwere ihe ngwọta, gụnyere ịhazi ya.
Iji mụtakwuo banyere ngwá ọrụ a ị nwere ike ịnweta Nkebi nke "Banyere" na ngalaba nke "Ugboro ajụjụ" ebe a na-ekpuchi ihe niile dị mkpa ma kọwaa n'ụzọ doro anya banyere ngwá ọrụ a kwuru. Ọzọkwa, buru n'uche na ọ bụ ezie Moodle nwere ọtụtụ akwụkwọ ederede, enwere otutu ozi ndi ozo kwesiri ntukwasi obi, ebe obu na o nwere a nnukwu obodo nke ndị mmadụ na ebe ebe ị nwere ike ịchọta ihe niile ịchọrọ maka iji ya afọ ojuju.
Maka ozi ọzọ na LMS nyiwe, Anyị na-akwado ịgagharị nnukwu weebụsaịtị nke Bit4 mụta, nke dị mma na mpaghara a.
"Bit4learn bu ebe omuma ihe banyere okwu e-mmụta, ebumnuche anyị bụ inwe ike ịnye ozi bara uru nke na-akwado ndị niile chọrọ ịrara onwe ha nye na ịnyefe ihe ọmụma site na itinye teknụzụ na-emebi.". Banyere Bit4learn.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Plataformas LMS» free, free na-emeghe, nke na-enye ihe ọzọ Oru oma ma di ire, ịkụzi na ịmụta, ọkachasị n’oge ndị a, mgbe telecommuting na Teleeducation dị mkpa ma chọọ, bụrụ ndị nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Nweta, Efu na Mmeghe LMS Nweta: Atụmatụ na Ọrụ
Cheers! Nwere ike ịkọtara anyị n'isiokwu gị, ebe ọ bụ na ị weere dị ka ọdịnaya maka weebụsaịtị anyị? Atte. Bit4learn
Zaghachi Jonathan Cavero Linares
Ekele Jonathan! N'ezie, enwere m mmasị na weebụsaịtị gị ma ọ bụ isi nke m weere dị ka ihe ndabere iji mepụta nke m. Were kwa ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ dị 2, gbakwunyere saịtị mbụ nke LMS Platform nke ọ bụla nyochara. Ọzọkwa, kwuo ha ma tinye ha dị ka ntụnye aka n’isiokwu ahụ ka ndị mmadụ wee gbasaa ntakịrị ozi ndị ọzọ gbasara nyiwe LMS na weebụsaịtị gị. Maka ndị ọzọ, ọtụtụ ihe ịga nke ọma yana ezigbo ahụike maka mmadụ niile.
A tọhapụrụ ụdị LMDE 4 ọhụrụ ahụ ma ndị a bụ mgbanwe ya
Enwere ike inwe mkpọchi na Internetntanetị, n'ihi nnọpụiche zuru ụwa ọnụ site n'aka Covid-19